Ergada ka qeyb galeysa shirweynaha dib u habeynta Garsoorka oo afar gudi loo qeybiyay – idalenews.com
Ergada ka qeyb galeysa shirweynaha dib u habeynta Garsoorka oo afar gudi loo qeybiyay
Shirweynaha Qaran ee wadatashiga Garsoorka Soomaaliya oo maalintii Labaad si toos ah uga socda Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qeybgalay Afheyeenka Golaha Shacbiga Soomaaliyeed Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Abuukaatee Ceydiid Ilkaxanaf,Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo Dhammaan Ergada mataleysa dadka Soomaaliyeed ee Shirka lagub casuumay.
Ugu horeyntii waxaa Khudbad ku saabsan Kaalinta Baarlamanka Soomaaliyeed kaga aaddan Garsoorka ka jeediyay Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari Afheyeenka Baarlamanka oo ku tilmaamay Shirkani mid aad ugu muhiimsan aayaha Garsoorka Ummadda,isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in Shirkan ay kasoo bixi doonaan qodobbo Dhaxal gal ah oo Shacbiga Soomaaliyeed heli doonaan Garsoor cadaalad ku dhisan.
“Waxaa aad muhiim u ah inaan dhammaanteen isla garanno in Garsoorka madax bannaanyahay ,Sharcigana uu yahay saldhigga Awoodda Dowladda,sidaas darteed waxaan talo kusoo jeedinayaa in lasoo uruuriyo Dhammaan Shuruucdii wadanka si loo helo Keyd Sharci oo ay ku cadyihiin Qodobbada Garsoorka”. Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Baarlamanka Soomaaliya intii uu ku guda jiray Khudbaddii uu ka jeedinayay Xarunta uu Shirku ka socdo.
Sidoo kale Guddoomiyaha Maxkmadda sare ee dalka Abuu kaate Ceydiid Ilkaxanaf oo ka hadlay Kulanka ayaa xusay in Garsooraha Soomaaliyeed uu u baahanyahay inuu helo Amni iyo Dhaqaale ku filan si uu cadaalad ugu sameeyo Ummadda.
Waxa uu intaasi ku daray Guddoomiyuhu in Xabsiyada qaarkood ay xilligaan ku jiraan Dad xiran Todobaad,Bilooyin iyo sanado kuwaasoo aanan weli la horkeenin maxkmad loona baahanyahay in wax laga qabto.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka C/qaadir Maxamed ayaa xusay in mararka qaar ay saraakiil ka tirsan Ciidamada Qalabka sida ee Somalia Soo xiraan dad aan dambi laheyn kadibna ay iyagu xabsiyada kasii daayaan Shakhsiyaadka ay rabaan iyagoo wax maxkmad ah soo marsiin ,sidaas awgeedna ay muhiim tahay in si qoto dheer looga fiirsado awoodda uu yeelanayo Garsoorka Somalia.
Afarta Guddi ee loo qeybiyay ergada ka qeybgaleysa Shirweynaha ayaa loo kala xilsaaray afar qodob oo muhiim ah kuwaasoo kala ah Dhismaha hay’adaha Caddaaladda ,Helitaanka Caddaaladda iyo Qodobbada Muwaadinka Soomaaliyeed ka hortaagan inuu helo caddaalad ,Kaalinta Ciidamada Booliska iyo Asluubta kaga aaddan Maxaabiista ku jirta Xabsiyada iyo Xiriirka ay la leeyihiin Muwaadiniinta,Jinsiyadda iyo Nidaamka cadaaladda iyo saameynta ay ku leeyihiin Naafad iyo caruurta.
Tala soo jeedinta guddiyadan ayaa la filayaa inay soo gudbiyaan Maalin kadib oo lagu ballansanyahay in si saraaxad leh looga doodo.
Cutubyo ka tirsan AMISOM iyo dabaabaadkooda oo safar dhinaca dhulka ah ku galay Baydhabo
Ergada ka qeybgalaysa shirka Kismaayo oo ansixiyay Axdiga KMG ah ee Maamulka Jubbaland